भारतमा कोरोना भयावह–संक्रमणको कारण धार्मिक अन्धविश्वास पनि हो
चैत्रे नवरात्रीको सातौं दिनको उपवासपछि मैले यो लेख लेखेको हुँ । मैले ३० वर्षदेखि वर्षमा २ पटक यस्तो उपवास बस्ने गरेको छु । मलाई मेरो धर्ममा गौरव छ । म यसलाई प्रेम गर्छु । तर, प्रेमको अर्थ कहिलेकाँही ती चिज भन्ने साहस गर्नु पनि हो, जहाँनेर यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
कोरोना महामारीपछि हाम्रो प्रतिक्रियामा त्यस्ता धेरै कुरा आएका छन्, जुन हाम्रो समुदायका लागि घातक छन् । हामी कहाँ अवैज्ञानिक सोच राख्ने हिन्दुहरुको संख्या निक्कै ठूलो छ । वास्तवमा भारतीय उपमहादीपमा बाहिरियाहरुको लामो शासन चल्नुको एउटा कारण यो पनि थियो ।
आज हाम्रो कोरोना अभिलेखले सबै रेकर्ड तोड्दैछ । मृत्यु अभिलेखले विश्व रेकर्ड तोड्दैछ । जबकी चीन र अमेरिकाले यो महामारीलाई पछाडि धकेल्न थालीसके । कोरोनापछिको आर्थिक विकासतिर अगाडि बढ्न थालिसके ।
यहाँ मैले लेखेका कुरालाई कसैले तोडमरोड गरेर कुनै गलत अर्थ नलगाओस् भनेर शुरुमै म केही स्पष्ट गर्न चाहन्छु । मेरो मतलब हो–
१. सबै हिन्दु अवैज्ञानिक र रुढीवादी हुन्छन् भन्ने हैन ।
२. अरु बाँकी धर्मका मान्छे अवैज्ञानिक सोच राख्दैनन् भन्ने पनि हैन ।
३. हिन्दु धर्म अरु धर्मभन्दा अवैज्ञानिक छ भन्ने पनि हैन । हैन, मेरो भनाईको मतलब यी कुनै हैन ।
अवैज्ञानिक सोच इसाई र मुस्लिममा पनि हुन्छ । सबै धर्ममा केही न केही अवैज्ञानिक विश्वास हुन्छन् । कुरा कति मात्र हो भने भारतमा हिन्दु धर्म प्रभावशाली छ । हाम्रो देशको भाग्य सिधै हिन्दु जनतासँग जोडिन्छ । त्यसैले अरु धार्मिक समुदायबारे केही भन्नुभन्दा मलाई लाग्यो पहिले आफ्नै धर्म सम्प्रदायबारे केही चिन्तन गर्नु राम्रो हुन्छ ।
विश्वमा प्रसिद्ध नोबल पुरस्कार विजेतादेखि लाखौं सर्वसाधारण हिन्दुहरु वैज्ञानिक मानसिकताका छन् । दुर्भाग्य के स्वीकार गर्नु पर्दछ भने अवैज्ञानिक र रुढीवादी हिन्दुको संख्या पनि सानो छैन । यस्ता अवैज्ञानिक हिन्दुहरु देशमा हाबी हुन काफी भएका छन् ।
अझ नराम्रो कुरा के छ भने केही हिन्दुहरु आफ्नो नक्कली विज्ञानलाई अवैज्ञानिक विश्वाससंग मिसमास पारेर सबैभन्दा वैज्ञानिक विचार यही हो भन्ने दाबी गर्दछन् । यो विज्ञान विरोधी र छद्म वैज्ञानिक रवैयाको हामीले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । ऐतिहासिक तबरले आक्रमणकारी र उपनिवेशवादीहरुले हामीलाई लुट्ने मौका पाए । हामीमाथि राज गरे । किनकी, उनीहरुसँग राम्रो प्रविधि थियो । अहिलेका अवस्थामा चीनजस्तो देशले हामीलाई उछिन्न थालेको छ ।
वैज्ञानिक मानसिकता भनेको के हो ? यो प्रश्न उठाउँने वित्तिकै जवाफमा केहीले तुरुन्तै हिन्दु धर्मग्रन्थहरुको महानताको चर्चा गर्न थाल्नेछन्, जसमा विज्ञान निहित छ । कसैले भन्ने छन् कि भारतमा यतिधेरै विज्ञान थियो कि दशमलवको ज्ञान नै हामीले प्रतिपादन गरेको हो । हाम्रा मिथकमा अनेक उड्नेवाला मेसिनदेखि आधुनिक हतियारहरुको सम्म जिकिर छ । त्यसैले हामी वैज्ञानिक सोचवाला हौं । दुर्भाग्यको कुरा के छ भने इतिहास वा मिथकको महिमामण्डन वा अतिशयोक्तिकरण गरेर हामी वैज्ञानिक सोचवाला हुन सक्दैनौं । वास्तवमा यसको उल्टो र नकारात्मक असर हुन्छ ।
सर्वप्रथम वैज्ञानिक सोचले यो स्वीकार गर्दछ कि हामी जे जान्दछौं, थोरै जान्दछौं, धेरै कुरा जाँन्दैनौं । संसारमा अझै धेरै कुरा खोज हुन बाँकी नै छ । नयाँ खोजहरुले हामीलाई हाम्रा पुराना विश्वास बदल्न मद्दत गर्दछन् । उदाहरणको लागि जब कोभिड आयो, यो भाइरसलाई हामी चिन्दैन, बुझ्दैनथ्यौं । जब अवलोकन, मापन, परीक्षण र खोज विधिद्वारा यसलाई राम्ररी बुझ्ने भयौं, अनि खोप बनाउन सक्यौं ।
यसको अर्थ हो– समयसँगसँगै जब केही नयाँ कुरा चाल पाइन्छ, त्यसले झन धेरै समाधान र उपायहरु थप्दै जान्छ । वैज्ञानिक मन भएका मान्छेले सधै नयाँ उत्तरको खोजी गर्दछन् । यसको ठीकविपरित अवैज्ञानिक मनले यो मान्छ कि हामीलाई जुन ज्ञानको आवश्यकता छ, त्यो हाम्रो महान अतित र हाम्रा पुर्खाले खोजिसकेका छन् ।
यदि हामी केवल आफ्ना शास्त्रहरुमा आधारित भएर चल्न चाहन्छौं भने गौरवशाली इतिहासमै मख्ख परेर बस्छौं भने, महान पूर्वजहरुको विश्वासमा कुनै प्रश्न उठाउँदैनौ भने, इतिहास र मिथकलाई आस्था बनाएर राख्छौं भने हामीलाई महान प्रगति प्राप्त होला भन्न सकिन्न ।
हाम्रो खानपान, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, औषधि विज्ञान, जीवन जिउने तरिका वा शासन शैली आदि बिषयमा कयौं अवैज्ञानिक हिन्दुहरुको यस्तो सोच हुन्छ कि हाम्रो अतितमै यी सबै कुराको जवाफ छ । हामीले एकक्षणलाई यो निराधार दाबीलाई मान्ने नै हो भने पनि फेरि पनि सवाल बाँकी नै रहन्छ, त्यसो भए के भयो ? कहाँ भट्कियौं हामी ? किन संसारको गतिबाट हामी पछि पर्‍यौं ?
वैज्ञानिक सोचको अर्थ हो, पुराना प्रश्नहरुको नयाँ उत्तर खोज्नु र समयको साथसाथ आफूलाई बदल्दै जानु नकी विगतको विज्ञानसंग टाँसिइरहनु । बिडम्बना नै भन्नु पर्दछ कि हामी स्कुलमा बच्चालाई विज्ञान पढाउँछौं, तर वैज्ञानिक सोचलाई जीवन व्यवहारमा लागू गर्न चाहँदैनौं ।
कोरोनाको दोस्रो लहरको बाबजुद लाखौं मानिसले कुम्भमेलामा डुबल्की लगाए । सारा विश्व हामीमाथि हाँस्यो । जब देशमा दैनिक लाखौं केसहरु देखा पर्दै थिए, हामी भने लाखौं मानिस घाटमा उत्रेका थियौं । हामीले तब्दिली जमातलाई त बढो छिटो आरोप लगाएका थियौं । तर, हामीले आफूतिर फर्किएर कहिले हेर्‍यौं ?
मामिला फेब्रुअरीदेखि नै तीव्र हुँदै थियो, बल्ल हामीले अप्रिलको अन्त्यतिरदेखि खोप योजनालाई अलिक गम्भीरताका साथ महत्व दियौं ।
म आफ्नो धर्म र आफ्ना धर्मग्रन्थहरुको सम्मान गर्दछु । तर, मलाई यो पनि थाहा छ कि कुनै धर्मगुरु वा धर्मालयले हैन, वैज्ञानिक प्रयोगशालाले बनाएको खोपले मात्रै मलाई बचाउन सक्दछ । मानव जातिलाई बचाउन सक्दछ । मेरो भनाई यो पनि हैन कि यही कारणले विज्ञान धर्मभन्दा माथि हुन्छ ।
तर, हामीले यो बुझ्नै पर्दछ कि आस्था र विज्ञानको आआफ्नो भिन्नाभिन्नै स्थान छ । आस्था, छद्म विज्ञान, इतिहास, मिथक, धर्म र संस्कृतिले सबैभन्दा माथि हुन्छन् भनेर सोच्नु बिल्कुल अवैज्ञानिक सोच हो ।
यी कुनै चिजले आजका समस्या हल गर्न सक्दैनन । जसले एक काल्पनिक अतितको विजय मज्जा दिन सक्दछ, तर त्यो आनन्द क्षणभर मै निष्क्रिय हुन्छ । प्रगति तिनै मानिसलाई प्राप्त हुन्छ जो अतितभन्दा भविष्यको जितमा विश्वास गर्दछन् ।
आफ्नो धर्मलाई प्रेम गरौं । असल परम्परालाई सम्मान गरौं । तर वैज्ञानिक सोच राख्न नचुकौं । नयाँ खोजप्रति जिज्ञासा राखौं । परिणामलाई बदल्न सक्ने कारणहरुलाई चिनौं र बदलौं । कुनै अवैज्ञानिक सोच र रुढीवादले हैन, यही वैज्ञानिक सोचले मात्र भारतका सुनौला दिनहरु फिर्ता ल्याउन सक्दछ ।
(भारतका चर्चित उपन्यासकार भगतको यो आलेख दैनिक भास्करको हिन्दी संस्करणबाट अनुवाद गरिएको हो)
केरलमा यसरी बच्यो वामपन्थीको साख
मोदी–शाह समूह थोत्रो भइसक्यो, अविलम्ब बिदा गरौं
जार–मानसिकताबाट मुक्त हुन नसकेको दलीय नेतृत्व